Bandages & Teepu Nsukka & Ndị na-eweta ya | China bandeeji & etere Factory
Disposable Mwepu Clothe ...
Hoof Nkedo Mezie
Hoof nkedo teepu bụ a pụrụ iche mgbatị ihe e mere na ụfọdụ Njirimara maka ngwa na inyinya ikitiukwu. Ọ bụ adịghị ka orthopedic mgbatị na na ikiti ụkwụ n tapefe teepu nwere a ukwuu elu resin ọdịnaya, nke accommodates maka eyi resistance.
Hoof nkedo teepu si wrapping usoro na mkpụrụ ihe na-akwado saịtị nke ọdịda na ikitiukwu nakwa dị ka ihe nke mgbidi ọdịda dị ka, na-acha ọcha akara ọrịa, flares, na mkpa ọbụ.
Ekike bandpe nke Crepe nwere udidi dị nro, nrụgide dị elu na ikuku ikuku dị mma, nke nwere ike ime ka mgbasa ọbara dịkwuo mma ma gbochie ọzịza aka.
1. Ihe: 80% owu; 20% spandex
2. Arọ: g / ㎡: 60g, 65g, 75g, 80g, 85g, 90g, 105g
3. Clip: jiri mkpirisi mkpirisi ma ọ bụ withour, vidiyo na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ obere vidiyo
4. Size: ogologo (agbatị): 4m, 4.5m, 5m
5. Obosara: 5m, 7.5m 10m, 15m, 20m
6. Nkwakọ ngwaahịa Blastic: n'otu n'otu na-agbanye na cellophane
7. Mara: ahaziri nkọwa dị ka o kwere omume dị ka ndị ahịa na-arịọ
Tubular na-agbanwe bandeeji nwere ọmarịcha egosipụta na itinye n'ọrụ. Enwere ike iji ha rụọ ọrụ na akụkụ ọ bụla nke ahụ. Site na nhazi netwọkụ pụrụ iche yana ọnọdụ ọrụ ya, ọ nwere ike ịbịaru ahụ onye ọrịa ahụ nso.
• Jiri a dịgasị iche iche: Na polima bandeeji plywood ofu, gypsum bandeeji, inyeaka bandeeji, mkpakọ bandeeji na splicing plywood dị ka liner.
• Ọdịdị nro, nke dị mma, nke kwesịrị ekwesị. Ọ dịghị deformation mgbe elu okpomọkụ nwoke ịga ụlọ ọgwụ
Mfe iji, mmiri, mara mma na gen-erous, anaghị emetụta ndụ kwa ụbọchị.
Ihe mgbochi mmiri
The waterproof pad bụ ọhụrụ ngwaahịa mepụtara anyị ụlọ ọrụ, na elu waterproof arụmọrụ, ezi elasticity na ala akpụkpọ mmetụta. Ka ị zuru ike bath.
Atụmatụ: waterproof, adụ, ala, okpomọkụ-insulating
Ngwa: orthopedics, ịwa ahụ
Nkọwa: Mpepu mmiri na-enweghị mmiri bụ ngwaahịa inyeaka nke akwa / akwa nkedo iji gbochie akpụkpọ ahụ nke onye ọrịa ka ọ mebie mgbe nkedo akwa / nkedo siri ike.
Ihe mgbochi mmiri bụ ihe mgbakwunye na nkedo akwa iji gbochie ha imebi akpụkpọ anụ nke ndị ọrịa mgbe ha siri ike, ọ na-eku ume ọkụ, na-agbanwe, dị nro ma dịkwa mma maka anụ ahụ.
Atụmatụ: adụ, nke ọma, na-egbochi okpomọkụ
Anyị Orthopedic Casting teepu, enweghị ihe mgbaze, enyi na gburugburu ebe obibi, dị mfe ịrụ ọrụ, ọgwụgwọ ngwa ngwa, ịrụ ọrụ dị mma, ịdị arọ dị elu, ike siri ike, ezigbo mmiri na-adịghị ọcha, ịdị ọcha na ịdị ọcha. adaba iji see foto X-ray ma lelee ịgwọ ọkpụkpụ na-enweghị wepụ bandeeji, ma ọ bụ nkedo mkpa iwepu ya.
Self nrapado bandeeji na-bụ-eji maka mpụga nkịtị na fixation. Na mgbakwunye, enwere ike iji ndị egwuregwu na-emega ahụ mgbe niile. Enwere ike ịgbanye ngwaahịa ahụ n'aka nkwojiaka, nkwonkwo ụkwụ na ebe ndị ọzọ, nke nwere ike ịrụ ọrụ ụfọdụ nchebe.
• Etinyere ya n'ọrụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ na idozi ya;
• Kwadebere maka ihe enyemaka na mberede na ọnya agha;
• Ejiri iji kpuchido ọzụzụ dị iche iche, egwuregwu, na egwuregwu;
• Ọrụ ubi, nchebe nchekwa ọrụ;
• Nchedo na nnapụta ahụike ahụike ezinụlọ;
• Ngwunye ọgwụ anụmanụ na nchedo egwuregwu anụmanụ;
• cochọ Mma: inwe ya na-adaba adaba iji, na gbaa gbaa, ọ nwere ike iji dị ka a mma mma.
A na-eji bandeeji gauze nke na-arị elu pulp, tinye akwa akwa akwa, tinye plasta nke ntụ ntụ Paris iji mee, mgbe ị rụsịrị mmiri, nwere ike ime ka obi sie ike na obere oge mezue imewe ahụ, nwee ikike ịdị ike siri ike, nkwụsi ike dị mma. ịwa ahụ ma ọ bụ ịkpụkpụ, ịkpụzi ebu, ngwa inyeaka maka aka aka, stents nchebe maka ọkụ, wdg, na ọnụ ala.